Jittoo Monywa – Welcome to U Thumingala Dhamma Talk | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Ni Lon Oo – Free Daw Aung San Suu Kyi and Free Burma
4th Nov 2010 – Burmese Journal Digests →
Jittoo Monywa – Welcome to U Thumingala Dhamma Talk
ဦးသုမင်္ဂလ တရားပွဲကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
နိုဝင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၀
ဒီနေ့ မှ ဒီနေ့ နော်။ ဟုတ်လား။ လာဖြစ်အောင် လာနော်။
ဒီလောက်တောင် ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ပိတ်ရက်ကလေးနဲ့ ဆုံနေတာကို လာဖြစ်အောင်သာ လာခဲ့ပါဗျာ။ ဆရာတော်ကတော့ နေမကောင်းနေတဲ့ ကြားထဲကကို ဟောမှာတဲ့။ မိုးကုတ်သူ မိုးကုတ်သားတွေက တောင်းတောင်းပန်ပန် လျှောက်လို့သာ ဆရာတော့်တရားကို နာရမှာလေ။
ဒီနေ့ တရက်တည်းပဲ ဆရာတော်ပုံတော်ကို ဒါနလုပ်မှာနော်။ တပုံကို ၂ ဒေါ်လာတောင် အကုန်ခံကူးပြီး ပုံပေါင်း ၁၂၀၀ (ထောင်ကျော်) ဝေမှာဗျ။ အလှူအတွက် ကူညီပံ့ပိုးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူး အထူး တင်မိပါတယ်ဗျာ။
ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်အပေါင်းတို့ ….
ဒယ်အိုးဆရာတော်မှ တရားတော်များ ဟောကြားချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တရားတော်နာ ကြွရောက်ပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် – နိုဝင်ဘာ ၅ – ၆ – ၇ ရက် ၂၀၁၀
အချိန် – ညနေ ၇ နာရီ မှ ၉ နာရီ
နေရာ: Informatic Campus
12 Science Center Road, S609080 (Jurong East MRT အနီး)
ဆက်သွယ်ရန် – ၉၁၄၄၇၃၄၇
ဆရာတော် ဥူးသုမင်္ဂလ သည် သစ္စာပါရမီ တွင် သီတင်းသုံးပါမည်။
Blk 120, # 01-81, Ivory Height, Jurong East Street -13, Singapore 600120
တရားပွဲကို နာယူကြည်ညိုနိုင်ပါရန် အောက်ဖော်ပြပါ Website များမှ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပါမည်။
Posted by oothandar on November 5, 2010 in Letter from readers